1। ल्युप्रोरेलिन एसीटेट भनेको के हो?
2। Leuprolide एसीटेट अनुप्रयोग
3। कसरी Leuprolide एसीटेट काम गर्दछ
4। ल्युप्रोरेलिन एसीटेट कसरी प्रयोग गर्ने?
5। ल्युप्रोरेलिन एसीटेट खुराक र ल्युप्रोरेलिन एसीटेट प्रशासन
6। ल्युप्रोरेलिन एसीटेट साइड इफेक्ट
ल्युप्रोरेलिन एसीटेट पेप्टाइड एक प्रकारको हो जुन अन्य औषधिहरूसँगै पुरुषहरूमा प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार गर्न प्रयोग गर्दछ। जे होस्, यसले रोगको उपचार गर्दैन तर यसलाई फैलिनबाट रोक्न र तपाईंको शरीरमा प्रोस्टेट क्यान्सर प्रभाव दबाउन सहयोग गर्दछ। ल्युप्रोरेलिन अमेरिकाको संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्रान्ड नाम लुप्रन अन्तर्गत बेचिन्छ, र यो बिभिन्न देशहरूमा बिभिन्न ब्रान्ड नाममा उपलब्ध हुन सक्छ।
प्रोस्टेट क्यान्सर प्रकारको बहुमत टेस्टोस्टेरोन हार्मोनमा निर्भर गर्दछ तपाईंको शरीरमा बढ्न र फैलाउनको लागि। यद्यपि लेउप्रोरेलिन एसीटेट पाउडरले टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्पादनलाई दबाएर प्रोस्टेट क्यान्सर कोषहरूको बृद्धिलाई सजिलो बनाउँदछ र साथै पेशाब गर्दा रोगीहरूले भोग्ने समस्या वा समस्याहरूलाई कम गर्दछ।
अर्कोतर्फ, लुप्रोन एन्डोमेट्रियोसिस लक्षणहरूको उपचार गर्न महिलाले प्रयोग गर्दछ, जसलाई सामान्यतया गर्भाशय फाइब्रॉएड भनेर चिनिन्छ। ल्युप्रोलाइड एसीटेट र गर्भावस्था महिलाहरूको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो, यो बच्चा नखानुहोस् यदि तपाईं बच्चा जन्माउने अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईं आफ्नो डाक्टरसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। Lupron एक इंजेक्शन ड्रग हो कि मांसपेशियों मा हरेक 1-6 महिना मा इंजेक्सन गर्नु पर्छ। सँधै यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको डाक्टरबाट डोज लिनुहुन्छ, तर तपाइँ तपाइँको घरको आराममा सजिलो खुराक प्रशासनको लागि कसरी आफूलाई इन्जेक्सन गर्ने बारे तालिम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
Leuprolide एसीटेट किन्न सजिलै दुबै अनलाइन र शारीरिक फार्मेसीमा उपलब्ध छ। ल्युउप्रोलाइड एसीटेट लागत कहिलेकाँही तपाईले यसलाई किन्नुभएकोमा भर पर्दछ। जे होस्, एक मेडिकल पेशेवर बाट सही पर्ची लिनु यो सँधै राम्रो हुन्छ। याद गर्नुहोस् ओभरडोज गर्ने वा ल्युप्रोरेलिन एसीटेटको दुरुपयोगले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, र तपाईंले यसलाई मेडिकल परीक्षण बिना नै लिनु हुँदैन। क्यान्सर गम्भीर रोग हो, र तपाईंले यसको औषधी नजोल्ने रूपमा जोखिम उठाउनु हुँदैन। अधिक जानकारी को लागी तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस् ल्युप्रोरेलिन एसीटेट पाउडर खुराक
ल्युप्रोलाइड एसीटेट पाउडर एक शक्तिशाली गोनाडोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर (GnRHR) एगोनिस्ट हो, र यो विभिन्न क्लिनिकल अनुप्रयोगहरूमा आवश्यक भएको प्रमाणित भएको छ। उदाहरण को लागी, गर्भाशय फाइब्रॉएड, प्रोस्टेट क्यान्सर, केन्द्रीय प्रोकसियस यौवन (एक शर्त जसले बच्चालाई यौवन हुने अपेक्षा भन्दा चाँडो पुग्ने स्थितिमा पुर्‍याउँछ), र एंडोमेट्रियोसिसको उपचारमा। यी सबै स्वास्थ्य स्थितिहरुमा, ल्युप्रोलाइड एक्लै वा अन्य औषधीको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो औषधि पनि अन्य औषधीको साथ एनिमियाको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन गर्भाशय फाइब्रॉएडसबाट परिणाम हुन्छ।
यो ल्युप्रोरेलिन एसीटेट खुराक मांसपेशिहरु को माध्यम बाट तपाईको शरीर मा इंजेक्सन गर्नुपर्छ। तपाईको खुराक प्रशासित गर्न यु-एक्सएनयूएमएक्स इन्सुलिन सिरिंज प्रयोग गर्नुहोस् र यो पनि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको सिरिन्ज प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँले फरक सिरिन्ज प्रयोग गर्नुपर्दछ, त्यसपछि मात्र 100-mL प्रयोज्य प्रयोग गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि प्रयोगकर्ताहरू भन्दा पहिले उत्पादकले बयान गरे अनुसार ल्युप्रोरेलिन एसीटेट पाउडर मिश्रित गर्नुपर्छ। समाधान हिलाउँदा तपाईंलाई पर्याप्त मिक्सिंग प्रदान गर्न सक्दैन। ल्युप्रोलाइड कुराकानीले तपाइँलाई तपाइँको इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ तर तिनीहरूलाई तपाइँको डाक्टरबाट सँधै लिनुहोस्
3। कसरी ल्युप्रोलाइड एसीटेट काम गर्दछ?
कार्यको ल्युप्रोरेलिन एसीटेट संयन्त्र उपचार अन्तर्गत स्वास्थ्य स्थितिमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, जब प्रोस्टेट क्यान्सर उपचार को लागी प्रयोग, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन कम गर्छ, जो क्यान्सर कोशिका को वृद्धि र प्रसार लाई सहयोग गर्दछ। यद्यपि Leuprorelin एसीटेट पाउडर (74381-53-6) प्रयोगले प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार गर्दैन, यसले तपाईंको शरीरमा क्यान्सर कोषहरूको पीडा र वृद्धि कम गर्नमा मद्दत गर्दछ। यद्यपि यो औषधि एक्लो लिन सकिन्छ, तर चिकित्सकहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाई यसलाई राम्रो परिणामका लागि अन्य प्रोस्टेट क्यान्सरको औषधिसँगै लैजानुहुन्छ।
यद्यपि केही देशका महिलाहरूमा औषधि प्रयोगको लागि अनुमोदन गरिएको छैन, यो एंडोमेट्रियोसिसको उपचारमा प्रभावकारी साबित भएको छ। यहाँ ड्रगले तपाईको शरीरमा इस्ट्रोजेन उत्पादन दबाएर काम गर्दछ जुन सामान्यतया "इस्ट्रोजेन सर्भ" भनेर चिनिन्छ। यहाँ, कार्यको ल्युप्रोरेलिन एसिटेट संयन्त्रले मुख्यतया तपाईको अवधिको लागि जिम्मेवार एस्ट्रोजन, हर्मोन घटाउने कुरामा केन्द्रित गर्दछ। जब तपाईं ल्युप्रोरेलिन एसीटेट डोज लिन थाल्नुहुन्छ, एस्ट्रोजेन स्तरहरू केहि हप्ताको लागि बढ्नेछ, जस पछि एस्ट्रोजेनको स्तर तल जान्छ। यो प्रक्रिया अस्थायी रूपमा तपाइँको अवधि रोक्न सक्छ, र परिणाम स्वरूप, endometriosis लक्षण राहत हुनेछ।
अर्कोतर्फ, ल्युप्रोरेलिन एसीटेट स्तन क्यान्सरले महिलाहरूमा घातक रोगसँग लड्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन स्तन क्यान्सरको कारण होइन, उनीहरूको वृद्धि र फैलाउन सहयोग पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी दुई हर्मोनको उत्पादन या त अंडाशय हटाउन एक शल्य प्रक्रिया द्वारा वा एक चिकित्सा प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ।
पिट्यूटरी ग्रंथिबाट उत्पादित लुइटनाइजिंग हार्मोन, अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेनको उत्पादनलाई ट्रिगर गर्दछ। ल्युप्रोरेलिन एसीटेट प्रयोगले लुटेनिजिंग हार्मोनको उत्पादनलाई दबाउँछ, यसैले तपाईंको शरीरमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको स्तर कम गर्दछ। यसको मतलब क्यान्सर कोशिकाको बृद्धि र विस्तार सुस्त हुनेछ, जसले स्तनको क्यान्सर नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
ल्युप्रोरेलिन एसीटेट प्रशासन सीधा ईन्जेक्शन वा पाउडरको माध्यमबाट दुई प्रमुख तरिकामा गर्न सकिन्छ, जुन सामान्यतया डोज लिनु अघि एक विलायकको साथ पुनःनिर्माण हुन्छ। डाक्टरहरू हाम्रा दुबै प्रक्रियाहरू बोक्नका लागि सबै भन्दा राम्रो व्यक्तिहरू हुन्, तर जब तपाई तालिम प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाई सजिलै घरमा यो काम गर्न सक्नुहुनेछ।
(1) ल्युप्रोरेलिन एसीटेट इंजेक्शन
ल्युप्रोरेलिन एसीटेट इंजेक्शन एक लामो-अभिनय औषधी हो जुन इन्ट्रामस्क्युलरली ईन्जेक्शन गरिन्छ र एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा प्रशासित गर्नु पर्छ। इंजेक्शन प्राय: प्रत्येक महिना एक पटक वा हरेक 3, 4, वा6महिना एक पटक तपाइँको सर्तमा निर्भर दिइन्छ। अर्कोतर्फ, ल्युप्रोरेलिन एसीटेट ईन्जेक्शन कहिलेकाँही लामो-अभिनय निलम्बनको रूपमा दिन सकिन्छ सामान्यतया (एलिगार्ड) को रूपमा चिनिन्छ जुन तपाईको मांसपेशीहरूमा हरेक 1, 3, 4, वा6महिनामा इन्जेक्सन गरिन्छ।
चिकित्सा जाँच पछि, तपाईंको डाक्टरले सोही अनुसार सल्लाह दिनेछ र तपाईंको लागि उत्तम पेप्टाइड पाउडर खुराक पनि लेख्नुहुनेछ। तपाईंको खुराक चक्र लिने समय पनि तपाईंको अवस्था जाँच गरे पछि तपाईंको डाक्टरले निर्धारित गर्नेछ। सामान्यतया इन्जेक्सन एक बिरामीमा फरक हुन्छ।
(2) ल्युप्रोरेलिन एसीटेट पाउडर पुनर्गठन
कहिलेकाँही तपाई लेउप्रोरेलिन पाउडर प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ, जुन यस शक्तिशाली औषधिको पनि एक शक्तिशाली रूप हो जुन विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ, जस्तो कि माथि उल्लेख गरिएको छ। जे होस्, यो लेउप्रोरेलिन एसीटेट पाउडर राम्रोसँग तयार गर्नुपर्दछ वा पुन: संरचना गर्नुपर्नेछ यो तपाईंको मांसपेशिहरूमा ईन्जेक्टेड हुनु अघि। पाउडर निरीक्षण गर्न आवश्यक छ र तपाईंले दूषित सिरिંજ प्रयोग गर्नु हुँदैन। ल्युप्रोरेलिन एसीटेट तयार गर्दा, औषधि निर्माताले प्रदान गरेको पातलो प्रयोग गर्नुहोस्। सेतो प्लन्गरलाई स्टापरमा स्क्रु गर्नुहोस् जबसम्म यो सुरु हुँदैन, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सिरिgeलाई ठाडो पक्रनुभयो। पहिलो टपरर ब्यारेलको बीचमा नीलो रेखामा पुग्न नसक्दा अब लगभग 8 सेकेन्डको लागि प्लनगरलाई बिस्तारै धकेल्दै पातलो छोड्नुहोस्। यो सबै समय सिरिंजलाई ठाडो राख्नुहोस्।
बिस्तारै पाउडर मिश्रण गर्नुहोस् कि एक निश्चित दुध निलम्बन बनाउँछ। यदि पाउडर कणहरू समाधानमा पूर्ण रूपमा हराउँदैनन् भने, सबै कणहरू पूर्ण रूपमा विघटन नभएसम्म सिरि tap ट्याप गर्नुहोस्। यदि Leuprorelin एसीटेट पाउडर (74381-53-6) पूर्ण रूपमा निलम्बनमा गएको छैन। पुनर्निर्माण पछि, तपाईको डोज चाँडै लिनुहोस् किनकि सस्पेन्सन एकदम थोरै समयमा बन्छ। साथै, कुनै पनि निलम्बन लिनुहोस् जुन पुनःनिर्माण पछि दुई घण्टा भित्रमा प्रयोग भएको छैन किनभने योसँग कुनै प्रिजरभेटिभहरू छैन र तपाईंको स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुन सक्छ।
ल्युप्रोरेलिन एसीटेट प्रशासन मात्र ईन्जेक्सन मात्र हो, र तपाईले सँधै राम्रो परिणामका लागि मेडिकल पेशेवरबाट डोज लिनु पर्छ। जति तपाईंलाई शंका छ तपाईंसँग यो अवस्था छ जुन यो पेप्टाइड पाउडरले उपचार गर्न सक्दछ, कहिल्यै किन्नुहोस् र यसलाई मेडिकल परीक्षण बिना नै लिनुहोस्। Leuprolide एसीटेट निर्माताहरु उपयोग निर्देशनहरूमा औषधि खुराक संकेत गर्दछ, तर त्यसले तपाईंको लागि काम नगर्न सक्छ।
मानव निकाय बिभिन्न छन्, र केहि डोज धेरै फरक हुन सक्छ तपाईलाई विभिन्न लेउप्रोलाइड एसीटेट साइड इफेक्ट वा एक्सपोष्ट गर्न न्यून चाहिएको परिणामहरू पठाउन असफल हुन। ल्युप्रोलाइड एसीटेट खुराक एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन्छ, र तिनीहरू पनि सर्तका साथसाथै प्रयोगकर्ताको उमेर द्वारा निर्धारण गरिन्छ। ल्युप्रोलाइड एसीटेट एक औषधि हो जुन एक डाक्टरको निर्देशन अनुसार लिनुपर्दछ जब यो जोखिमपूर्ण हुन सक्छ जब दुरुपयोग वा प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ बिभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरूको लागि केहि फरक ल्युउप्रोलाइड एसीटेट खुराकहरू छन्;
प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि वयस्क ल्युप्रोरेलिन एसीटेट खुराक
यहाँ बिभिन्न खुराकहरू छन् जुन भ्रमित हुन सक्छ, तर तपाइँको डाक्टरले तपाईको लागि सही छनौट गर्नेछ। निम्नानुसार खुराकहरू छन्:
1mg इंजेक्शन प्रति दिन एक पटक
5mg इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन जुन प्रत्येक महिनामा एक पटक लिनुपर्दछ।
तपाईं 22.5 मिलीग्राम को लागी जान सक्नुहुनेछ जुन तपाईं प्रत्येक तीन महिनामा एकचोटि लिनुहुनेछ।
त्यहाँ 30mg ईन्जेक्शन खुराक पनि प्रत्येक चार महिनामा एक पटक लिइन्छ।
45mg इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन जुन तपाईं प्रत्येक छ महिनामा एक पटक लिनुहुनेछ।
तपाईं 65mg subcutaneous इम्प्लान्टमा जानको लागि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ जुन केहि लचिलो छ किनकि तपाईं मात्र 12 महिना वा एक बर्षमा एक पटक मात्र खुराक लिनुहुन्छ।
एन्डोमेट्रियोसिसको लागि वयस्क ल्युप्रोरेलिन एसीटेट पाउडर खुराक
एन्डोमेट्रियोसिस बिरामीहरूको लागि सिफारिस गरिएको खुराक 3.75mg हो, जुन लगभग छ महिनाको लागि प्रत्येक महिनामा एक पटक इन्जेक्सन गर्नुपर्छ। त्यहाँ अर्को विकल्प पनि छ जहाँ तपाईंको डाक्टरले 11.25mg सुझाव दिन सक्छ, जुन तपाईंलाई प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक इन्जेक्सन गरिन्छ। एन्डोमेट्रियोसिसका लागि ल्युप्रोरेलिन लिने महिलाहरूले हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरेपीमा जानेबारे पनि विचार गर्नुपर्छ, जुन भासोमोटर लक्षण र हड्डी खनिज घनत्व हानि कम गर्नका लागि उपयुक्त छ। जहाँसम्म, प्रत्येक चिकित्सा उपचार को लाभ को वजन को प्राथमिकता दिइनु पर्छ जब सही चिकित्सा प्रक्रिया छनौट गर्दा।
पेडियाट्रिक ल्युप्रोरेलिन एसीटेट खुराक पूर्वानुमान यौवनका लागि
पूर्वानुमान यौवन एक अवस्था हो जहाँ बच्चाहरूले वयस्क सुविधाहरू अपेक्षे भन्दा प्रारम्भिक विकास गर्दछ। जब यौवन केटा र 8 केटीहरूमा9को उमेर भन्दा पहिले यौवन सुरु हुन्छ, यो आक्रामक मानिन्छ। अवस्था ल्युप्रोरेलिन एसीटेट डोज प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जे होस्, बच्चाको वजनले रोगको उपचारको लागि सही खुराक निर्धारण गर्दछ। डोज ब्रेकडाउन निम्नानुसार छ;
25kg भन्दा कम शरीरको वजन सिफारिश गरिएको खुराक 7.5mg ईन्जेक्शन प्रति महिना एक पटक हुन्छ
25 देखि 37.5 किलोग्राम तौलका बच्चाहरूले प्रत्येक महिनामा 11.25 को एक खुराक लिनुपर्दछ।
37.5kg माथिका बच्चाहरूको लागि, सिफारिश गरिएको खुराक 15mg इंजेक्शन प्रत्येक महिनामा एक पटक हुन्छ।
जब तपाईको ल्युप्रोलाइड पाउडर डोजहरू लिनुहुन्छ, हर्मोनल स्तरहरू पनि प्रत्येक 1 वा2महिना पछि परीक्षण गर्नुपर्दछ पर्याप्त पिट्यूटरी गोनाडोट्रपिन दमन छ भनेर सुनिश्चित गर्न। नियमित चिकित्सा जाँचले तपाइँको डाक्टरलाई उपचार प्रगतिको अनुगमन गर्न र साथसाथै उपचार अवधिमा हुने कुनै पनि घटनाक्रमलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
याद राख्नुहोस्, स्वास्थ्यको अवस्था जाँच गरेपछि वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि ल्युप्रोरेलिन खुराक सेट गर्न तपाईंको डाक्टर सही व्यक्ति हुन्। कहिलेकाँही तपाईलाई कम खुराकको साथ सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ जुन तपाईको शरीरको प्रतिक्रियालाई अवलोकन गरेपछि समयसँगै मिलाउन सकिन्छ। ल्युप्रोलाइड एसीटेट र गर्भावस्थालाई अनुमति छैन किनकि औषधीले अजन्मे शिशुलाई हानी गर्न सक्छ। महिलाहरूलाई सल्लाह दिइन्छ कि उनीहरू पेप्टाइड पाउडर नलगाउँदछन् जब उनीहरू आउँदछन् वा कुनै पनि समयमा गर्भवती हुने योजनामा ​​छन्।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, जब तपाईं कुनै औषधिको दुरुपयोग वा अधिक मात्रा लिनुहुन्छ, यसले तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा पार्नेछ; यद्यपि तपाईंको शरीरको शक्तिले कहिलेकाँही प्रभावहरूको गहनता निर्धारित गर्न सक्दछ। जब तपाईं लेउप्रोरोलिन एसीटेट लिने खुराक निर्देशनहरूको पालना गर्नुहुन्न उस्तै हुन्छ। शरीरको वजन र शरीर सहनशीलता जस्ता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर Leuprolide चेतावनी फरक हुन सक्छ। केहि प्रयोगकर्ताहरूले साइड इफेक्टको अनुभव गर्छन् तिनीहरूले लिओप्रोलाइड अन्तर्क्रियाहरू कम खुराक लिने गरेको छ भने कोहीले उच्च खुराक लिन सक्छन् र अझै पनि फाइदाहरूको आनन्द लिन सक्छन्।
त्यहाँ साधारण छन् ल्युप्रोरेलिन एसीटेट साइड इफेक्ट त्यो लगभग सबै प्रयोगकर्ता द्वारा अनुभव गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू समय संग गायब। उन्नत साइड इफेक्टहरू खतरनाक हुन्छन्, र एकचोटि तपाईंले ती अनुभव गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो चिकित्सकलाई तुरुन्त सूचित गर्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ, त्यहाँ दुर्लभ साइड इफेक्टहरू पनि छन् जुन तपाईले विरलै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ ल्युप्रोरेलिन पाउडर लिदा। यी साइड इफेक्टहरू निम्नानुसार छन्;
(1) सामान्य ल्युप्रोरेलिन एसीटेट साइड इफेक्टहरू
इंजेक्शन क्षेत्र वरिपरि पीडा
(2) गम्भीर ल्युप्रोरेलिन एसीटेट साइड इफेक्ट
यदि तपाईले निम्न साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो छिटो भन्दा चाँडो चिकित्सा ध्यान खोज्नुहोस्;
अनियमित वा छिटो सास फेर्दै
सुन्न वा तपाईंको खुट्टा वा हात झुकाव
(3) दुर्लभ ल्युप्रोरेलिन एसीटेट साइड इफेक्ट
यस औषधिसँग सम्बन्धित अनियन्त्रित साइड इफेक्टहरू पनि छन्। जे होस्, ती गम्भिर हुन्छन् जब तिनीहरू हुन्छन्। यसैले, यो तुरुन्त बिग्रनु अघि तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नु पर्छ। कहिलेकाँही तिनीहरू ओभरडोज गर्ने, वा एलर्जीको कारण देखा पर्दछ र तिनीहरूले समावेश गर्दछ;
महिला प्रयोगकर्ताहरूको लागि अत्यधिक योनि रक्तस्राव।
Leuprolide एसीटेट र मधुमेह एक अर्को दुर्लभ साइड इफेक्ट जुन तपाईं अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो औषधीले मधुमेह रोगी जोखिम बढाउन भनिन्छ।
महिलामा आवाजको गहिराइ
मुटुको धड्कन समस्या
निष्कर्षमा, चिकित्सा जगतमा सही रूपमा प्रयोग गर्दा ल्युप्रोरेलिन एसीटेट एक महान औषधि साबित भएको छ। एकै साथ, ल्युप्रोलाइड एसीटेट खरीद तपाईंको नजिकको फार्मेसीमा उपलब्ध छ, र तपाईं पनि विभिन्न अनलाइन स्टोरहरूमा आफ्नो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आज धेरै ल्युप्रोलाइड एसीटेट निर्माताहरू र आपूर्तिकर्ताहरू बजारमा छन्, तर जहिले पनि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ उचित अनुसन्धानमा एक गुणवत्ता उत्पादन प्राप्त गर्न आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। को ल्युप्रोरेलिन एसीटेट मूल्य एक विक्रेता भन्दा फरक हुन्छ, र त्यसैले तपाईं औषधि किन्नु अघि उचित अनुसन्धान गर्नु पर्छ। यद्यपि तपाईको डाक्टरबाट सहि खुराक लिनु भन्दा पहिले ल्युप्रोरेलिन एसीटेट स्तन क्यान्सर लिनुहोस्।
गीत, G., Gao, H., र युआन, Z. (2013)। स्तनको क्यान्सर भएको प्रीमेनोपाउसल बिरामीहरूमा साइक्लोस्फोस्फेमिड – डोक्सोरबिसिन-आधारित कीमोथेरापी पछि डिम्बग्रंथि समारोहमा लिओप्रोलाइड एसीटेटको प्रभाव: दोस्रो चरणको अनियमित परीक्षणको नतीजा। चिकित्सा परिकल्पना, 30(3), 667।
Khhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C, Seitz, C., & Mueck, AO (2010)। एक खुराक X 1, 2, र4मिलीग्राम डायन्डोजेस्टको एन्डोमेट्रियोसिसको लागि दैनिक प्रभावकारिता र सुरक्षा निर्धारण गर्न अन्तर्गत अध्ययन। अन्तर्राष्ट्रिय स्त्री रोग र प्रसूति विज्ञान जर्नल, 108(1), 21-25।
ट्युन, यूडब्ल्यू, ग्रुचा, डी।, र बैचर, पी। (2013)। उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरमा छ महिनाको ल्युप्रोरेलिन एसीटेट डिपो फॉर्मूलेसनहरू: क्लिनिकल मूल्यांकन। बुढेसकालमा क्लिनिकल हस्तक्षेप, 8, 457।
जोनसन, एसआर, नोलन, आरसी, अनुदान, MT, मूल्य, GJ, Siafarikas, ए, बिन्ट, L., र Choong, CS (2012)। केन्द्रीय प्रोकसियस यौवनका लागि डिपो ल्युप्रोरेलिन एसीटेट थेरापीको साथ सम्बन्धित बाँझ फोडा गठन। बाल चिकित्सा र बच्चा स्वास्थ्य को पत्रिका, 48(3), E136-E139।
एचफाइभ, खुराक, साइड इफेक्ट र चेतावनीहरूमा Enfuvirtide प्रयोग